Burmese Poetry Foundation: January 2011
စိတ်အားငယ်ခြင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ရဲ့ အင်ဂျင်များ
မိုးကောင်းကင်ဟာ စိမ်းနေတယ်။ စိမ်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်တော်တို့သိဖို့ ဘာစာအုပ်မှလည်း
မရှိဘူး။ မိုးရွာနေတာ ဘယ်တုန်းကမှ မတိတ်ခဲ့ဘူး။ ယောက်ျားသုံးယောက်ရှိတာ၊ လေးယောက်
စကားပြောနေကြတယ်။ မိန်းမ တယောက်ဟာ လျှာအောက်မှာ တီကောင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ
သယ်ဆောင်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်အလှည့်မရောက်သေးပဲ ကျွန်တော်ဝင်ပြောမိပြန်ပြီ။ အချိုး
အစားတွေဟာ ကိုးလိုးကန့်လန့်၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ကြမ်းတမ်း။ မိုးကောင်းကင်ဟာ
စိမ်းနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတွေရဲ့ အမည်နာမတွေ သိရဖို့ ဘာစာအုပ်မှလဲ မရှိဘူး။
အရုပ်တစ်ရုပ်ကို ပွေ့ပိုက်ထားတဲ့ ယောက်ျားအလောင်းတစ်လောင်း ကို ခင်ဗျား သတိပြုမိလား။
သူမ အဲသလောက် အော်ရတာ ဘာကြောင့်ဆိုတာ ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ဖူးလား။ ပြီးတော့ ဘာ
ဖြစ်လို့၊ ဥပမာပေါ့နော်၊ ရုပ်တုတွေရဲ့ ဦးခေါင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဆေးရုံအောက်က မြေတိုက်ခန်းထဲ
သိမ်းလိုက်သလဲ။ မိုးကောင်းကင်ဟာ စိမ်းနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြောင်းပြဖို့ ဘာစာအုပ်မှ
မရှိဘူး။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပါပဲ။ သူ့ကားသူ ဘယ်မှာ ပါကင်ထိုးခဲ့မှန်း မသိတော့လို့
သူ့တိုက်ခန်းဆီသူ ပြန်ပြန်သွားရတယ်။ မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာ လိုက်နာရမယ့် လမ်းညွှန်ချက်တစ်စုံ
တင်ထားတယ်။ သူ့ရဲ့ အသက်ရှူကိရိယာဟာ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက် ပလာဇာပေါ်ဝဲနေတဲ့ အင်္ဂတေနု
မိုးတိမ်နံရံဘေးမှာပဲ ကပ်မောင်းနှင်ဖို့ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခံထားရတယ်။ မိုးကောင်းကင် ဟာ
အစိမ်းရောင်စွက် မီးခိုး။ တစ်ယောက်ယောက်က ခင်ဗျားဆီ အခိုင်အမာလာပြောတယ်။ သူဟာ
John Yau ‘ Engines of Gloom and Affection ’
Translated by Zayyar Linn
ခုဟာက ဖျက်မပစ်လို့ မရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့
ကဗျာဆိုတာ ရေးပြီးဖျက်ပစ်ရတယ်လို့ သိတာမကြာသေးဘူး
ကဗျာဆိုတာ ရေးပြီးဖျက်ပစ်ရတဲ့ အမျိုးအစား
သူများတွေ ဖျက်တာ ခံရလိမ့်မယ်
သူများဖျက်တာ မခံချင်ရင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဖျက်ပေါ့
လူတွေ ဘဝကူးကောင်းဖို့ လိုသလို
ကဗျာတွေလည်း ဘဝကူးကောင်းဖို့ လိုတာပေါ့
ရေးပြီးသားအရုပ် ပြန်ဖျက်သလို ဖျက်ပေါ့
ဆောက်ပြီးသားအသိုက်ကို ပြန်ဖျက်သလို ဖျက်ပေါ့
ဖျက်ပြီးရင် ကိုယ့်ကဗျာကိုယ် ပြန်ဖျက်ရတာ
ကဗျာဆိုတာ ဖျက်မပစ်ရင် ကျန်ခဲ့မှာပဲ
ဖျက်ချင်ရင် ဖျက်သင်္ဘော တစ်စင်းလို
အမဲဖျက်သလို သဘောထားပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်
ဖျက်ရတာ ခက်ပါတယ်။ ။
ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၇
ငိုသံကို အပြင်လူကြားမှာ စိုးတာနဲ့
ရေသံမှာ တစ်စက်ကလေးမှ ခံစားချက်မရှိဘူး။
နှင်းတွေ ဝေတုန်းမို့လား။ ။
Labels: ကဗျာ, မိုဃ်းဇော်
မိုးထဲရေထဲမှာ ကိုယ့်သွေးသားတွေက ဆူပွက်မြဲ
မင်းရယ်သံက ကိုယ့်ရင်မှာ နေခြည်ဖြာတောက်ပမြဲ ။ ။
ကဗျာရေးသူ ဆွေးမြေ့ဘွယ် နှင်းမြူတွေနဲ့လုံးထွေးလို့။
ဘဝ၌ ရွတ်ဆိုခဲ့သမျှ မမေ့နိုင်
ဘဝ၌ မရွတ်ဆိုခဲ့ပေမယ့် ကြားနိုင်။
ကိုယ့်ဘက်က လိုက်လျောနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ။
မိုဃ်းဇော် စီစဉ်သည့် ခေတ်ပြိုင်ကဗျာအချို့ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
ဘလော့ဂ် ကဗျာဆရာများရဲ့နှစ်သစ်ကူး ကဗျာပွဲတော် အစီအစဉ် ၆ (ခင်အောင်အေး၊ ဇေယျာလင်း၊ သိုးထိန်း၊ လွန်းဆက်နိုးမြတ်)
ဘလော့ဂ်ကဗျာဆရာများရဲ့ နှစ်သစ်ကူးကဗျာပွဲတော် အစီအစဉ် ၆
၂၀၁၀၊ ဗမာကဗျာ အဆက်အပေါက်၊ ဗမာ ကဗျာဗေဒနဲ့ မသိကိန်းတခု
လ ရောင်နဲ့ နာနတ်ယို တခြမ်းစီ သုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့် ဟုတ်ကဲ့ အရေပြားနာ မူရင်းကြယ်တွေရဲ့ အရိပ်
အယောင်မျှ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုတာ ဒီလိုမြန်ပြီး ဒီလိုလွယ်ကူရမယ် သိပ်ပြောချင်ဆိုချင်စိတ်တွေ ယိုဖိတ်နေတုန်း
ပန်းပွင့်ဖတ်နုနုလေးတွေ အနှေး ကြွေကျလာ (ဖတ်ပါ) အကူအညီ ပြူတင်းပေါက် စားပွဲ တန်ဆာပလာ နာရီလက်
တန် ပြောင်းပြန်လည်ရင်း ထီးများ ခမောက်များ ဘိန်းအစားထိုး ပန်းဂျုံ “ဟယ် ခရုတွေ” မီးရောင်ဟာ အဲဒီနောက်
ကို ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ရင်း “ ဒီဟာ ကော်မရှင်နာ ချူအင်-လိုင်း ပါ” ဟု ဟစ်ကြွေးသံများ သီချင်းထဲမှာ စက္ကူစုပ်
တွေ လမ်းများထဲသို့ လေညှင်းကလေးများ သုတ်ဖြူးလာသည် ပြုံးပြကာ “ခွပ်ခွပ် ခွပ်ခွပ်နဲ့ သွားနေတုန်းပါပဲဗျာ” ဟု ပြောတတ်သည် လက်တွေ့မှာလည်း လက်တွေ့အောင် (လက်နဲ့မတွေ့သေးလည်း မတွေ့တွေ့အောင်)လုပ်
တတ်သည် ဟော ပြောရင်းဆိုရင်း ပြေးဝင်လာပြီ ရိုက်ကွင်းထဲ ဇာတ်ညွှန်းထဲမပါပဲ ဇာတ်လိုက်ဟာ ဒါဏ်ရာရ လဲ
ကျ ရွှေဘောင်သွင်း ရွှေအဆင်း ရွှေရုပ်ပုံလွှာ ကြိမ်းမောင်း ချိန်းခြောက်ခဲ့ဖူးသည် “ခင်ဗျား မြင်သားပဲလေ”
ပြောဆဲအခိုက် ဖုံးကဒ်မှာ လည်မှာဆွဲထားတဲ့လက်ဖွဲ့အဆောင်အယောင်မှာ ခုတ်ထစ်ရတော့တယ် ဓါးသွားဟာ တမဟုတ်ချင်း ရင်မှကျော ထုတ်ချင်းခတ်သွား အာလူးကြော် တဖတ်ဝါးရင်း ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဓါးသွားပေါ် အပိုး
မကျိုးတာလား အကျိုးမပေးတာလား အလိုလို ကြက်သီးတွေ ဘာတွေ ထ ပြီး လက်အုပ်ချီ ထိုင်ကန်တော့တာ
မင်း မုတ်ဆိတ်ငုတ်တိုကိုပဲ မင်းဂရုစိုက် သံသရာတလျှောက်လုံး အမှန်တကယ် အသုံးဝင်မယ့် တခုတည်းသော
အဲဒီ ‘သတိ’ တစ်လုံး မျက်မှန်အိတ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဒီစာ inmind ကနုတ်ဖော်ထားတဲ့ ကျွန်းသား ပါတေးရှင်း နား
နှစ်ဖက်ကို အုပ်ကာ သို့တည်းမဟုတ် နားနှစ်ဖက်ကို ထောင်စွင့်ကာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဖြောင့်စင်းသော ဆံပင်အုပ်လုံး
ပေါ် တပေါက်ချင်း ကျလာခဲ့ပုံ မွေးကင်းစ ကလေးလေး ကမ္ဘာကြီးကို အူငဲလို့ အာခေါင်ခြစ်အော်ငိုသံနဲ့နှုတ်ဆက်
လိုက်ပုံ ပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင် ခံနိုင်ရည်ရှိပုံများလို့ သူရေးတတ်လေတယ် သူမို့ရေးတတ်ပလေတယ် “ဒါပေမယ့် ကန့်သတ်မှုကို/ကျွန်ပ်တို့ကာလည်း ကာကွယ်ချင်တယ်/ဘယ်လို ကာကွယ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး”။ ။
၂၄၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၀ ဘန်ကောက် ၁၉း၅၇ နာရီ
ခင်အောင်အေးရဲ့ ကဗျာတွေကို ဒီလင့်ခ်တွေမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
ရုရှစကားမှာ oxota ဟာအမဲလိုက်ခြင်း
လင်းန်ဟက်ဂျီးနီးယန်နဲ့ အာကဒီတို့ လျှို့ဝှက်ထားတာ
ဇီနာသိသွားတယ် ဇီနာပဲပေးလိုက်တာ အဲဒီခေါင်းစဉ်
နေ့အလင်းဟာ ထင်ရတာထက်ပိုထူပိတ် ပိုသိပ်သည်း
စကားလုံးရဲ့ အနံ့ လေသံရဲ့ ခြေရာ အမူအယာလင့်စင်
နောက်ကျောတစ်ခုဟာ စွန်းထင်းနေတဲ့ အိပ်ယာခင်း
အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခု မိနေတဲ့ ကွန်ယက်
ဇီနာ၊ ငါသိတာကတော့ ဘယ်သူမဆိုဟာ မဲ ၃ မဲ
ကံစမ်းမဲ၊ ပလာမဲ နဲ့ ပယ်မဲ တစ်ခုခုပဲ
မနှုတ်ရသေးတဲ့ ဓါးစနဲ့ပဲ သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်
ဆာမူရိုင်းမဟုတ် မရီးန် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်
သာမန်လူတစ်ယောက်ပါပဲ ခိုင်းနှိုင်းစရာမလို၊ မရှိ
အပြုံးတွေမှာ အချိုဓါတ်အတိုင်းအဆ ရှိတုန်းပဲ
နှုတ်လိုက်မှ သေမှာလို့ မှတ်ချက်ချတယ် လဝန်းက
ဇီနာ၊ အဲဒါကိုဘယ်မှာစိမ်၊ ဘယ်မှာ ပွတ်တိုက်သလဲ
လီနင်ဂရက်ဒ်မှာ စစ်တွေမပြီးသလို . . . ဒီလိုပါပဲ
စောင်းနေတာကို စောင်းသွားမှ သိရသလိုပါပဲ
အာကဒီဟာ အမေရိကားကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။ ။
၁၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၀
၁။ ။ oxota ဟာ အမေရိကန် LP ကဗျာဆရာမ Lynn Hejinian ရဲ့ လီနင်ဂရက်ဒ်နေ့စဉ်ဘဝကဗျာစာအုပ်
၂။ ။ အာကဒီ ဟာ Post-Soviet ရုရှကဗျာဆရာ Arkadii Drackomomshchenko
၃။ ။ ဂျွိုက်စ်ရဲ့မဲဇာ ဟာ James Joyce ရဲ့ ပြဇာတ် The Exiles
ဇေယျာလင်း ကဗျာများကို ဒီလင့်ခ်မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
မြွေဟာထင်ရှူးသေတ္တာထဲမှာ ခွေခွေကလေး လှဲနေတယ်
အသက်ပြင်းတဲ့ သက်ပြင်းချသံက တော်တော်နဲ့ မသေနိုင်ဘူး
စားပွဲပေါ်မှာ ပန်းသီးတစ်လုံးက မေ့လျော့မှုရဲ့ စားသောက်ခြင်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်နေတယ်
မိုးစက်တွေက စိတ်မှန်ပြူတင်းပေါ် တပေါက်ပေါက်ကျရောက်လို့
ပိတ်ကားပေါ်က ဒဏ်ရာကြီးမှာ သွေးစသွေးနတွေ ခြောက်ကပ်သွားပါပြီ
နာကျင်မှုကတော့ တစက်စက် စီးထွက်နေတာပေါ့
အပြင်ဖက်က ရှုခင်းတစ်ခုလုံးက ဖိတ်ဖိတ်ထအောင် စိမ်းတောက်နေတယ်
ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်လုံးဖော်ထားရတဲ့ အရသာ
ရှင်သန်မှုရဲ့ တငွေ့ငွေ့ တနွေးနွေး တိုးနေတဲ့အသိ
ပီယာနိုထဲမှာ အဖြေတစ်ခုခုက မေးခွန်းတစ်ခုခုကို မျှော်လင့်နေတုန်းပဲ
တံစက်မြိတ်မှာ တွဲလောင်းချိတ်ထားတဲ့အရိပ်က တဖြည်းဖြည်းပျော့တွဲကျလာပြန်ပြီ
တိမ်အကြေးခွံတွေအောက်မှာ အတိတ်ဟာ တဖျတ်ဖျတ်လွင့်ပါလို့
သော့ပေါက်ထဲမှာ ကမ္ဘာတစ်ခုစာ ဆာလောင်မှုများ
မုတ်သုံရဲ့ သံရှည်ဆွဲပြီးအူလိုက်သံက ပန်းတွေကို ရင်ကွဲနာကျသေစေတယ်
ကြွေပန်းအိုးထဲမှာ အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုကို ထိုးထည့်စိုက်ပျိုးဖို့လိုနေသလိုမျိုး
မြေတိုက်ခန်းတံခါးဝကြေးသော့ပေါက်ကြီးက တစ်ကိုယ်ရည်အမှောင်မှာ ကျယ်လောင်နေရသလိုမျိုး
သစ်သားစည်အိုကြီးထဲမှာ ပယင်းရောင်လက်နေတဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒဟာ အိပ်စက်နေတယ်
လှေကားထစ်များဟာ နက်ရှိုင်းတိတ်ဆိတ်မှုဆီကို မြွေလိမ်မြွေကောက်ရောက်ရှိသွားလောက်ပါရဲ့
ဝတ်ပြုဆုတောင်းခန်းအတွင်းက ဓမ္မသီချင်းမှာ သက်တန့်ရောင်ခြေအိတ်ချွတ်သံကို ကြားလုပြီလား
စွတ်စိုတဲ့မြက်ခင်းပေါ်က ခြေဖဝါးဗလာနှစ်ဖက်ကို ဦးတိုက်နမ်းရှိုက်ရသောအခွင့်ကိုသာပေးပါ
၂ဝ၁ဝ မေလ ၂၅ရက်
သိုးထိန်းရဲ့ ကဗျာတွေကို ဒီလင့်ခ်မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
လွန်းဆက်နိုးမြတ်ရဲ့ကဗျာတွေကို ဒီမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် http://lunnsetnoemyat.wordpress.com/
ဘလော့ဂ် ကဗျာဆရာများရဲ့နှစ်သစ်ကူး ကဗျာပွဲတော် အစီအစဉ် ၄ (တည်ရ၊ အောင်ပိုင်စိုး၊ သူရနီ၊ ညိမ်းညို)
ဘလော့ဂ် ကဗျာဆရာများရဲ့ နှစ်သစ်ကူးကဗျာပွဲတော် ၄
လက်မထိပ်မှာ သွေးပန်းထွက်သွားတုန်းက ခင်ဗျားရပ်နေတာ ဟိုဘက်မှာလား ဒီဘက်မှာလား
လက်ဖမိုးယှက်ပြီး ပြုံးတုံ့တုံ့ လုပ်နေတယ်
သူဟာ ဖော်မြူလာ အမှားကြီး
ကောင်းကင်မှ မြေကြီး ငြိစွန်းနေတာ ဥပဒေ
မဟုတ်ဘူး သတ်မှတ်ချက်အရ ရောက်ရှိ
တစ်ဦးမှ အခြားတစ်ဦး အထူးသဖြင့် ကောင်လေးမှ ကောင်မလေး (ကောင်မလေးမှ ကောင်လေး)
အပြင်ကြွေ အစိုင်အခဲများ ဝေလည်းမွှေး
ကြွေလည်းမွှေး မိုးကြိုးသွား အုန်းပင် ဘာဖြစ်ဖြစ်
အသွားအလာ အနေအထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်
ဘူး နေရာမှာ နေဟာ နှင်းဆီပွင့်လို နီနီ ရဲရဲ ချည်လုံးထဲ
တ၀ဲလည်လည် လက်ညှိုးတစ်ချောင်း ထောင်
ဝါးနဲ့ဆောက်တဲ့ အိမ်ကလေး ကားတွေ ဖြတ်မောင်းသွားရင် သိမ့်သိမ့် တုန်
ခဲတံထဲ ခဲဆံဟာ အမြှောင်းလိုက်
နစ်မြုပ် တုံးနေရင် သွေးလိုက် ချွန်လိုက်
အပူချိန်က တဖြည်းဖြည်း အလံဖျားဟာ တိုင်ထိပ်ကို
ဂရုတစိုက် ပိတ်ပေးပါလား အပူတွေ
အခန်းပိတ်ပြီး ကျွန်တော် သိမ်းထားတယ်
ငါးကန်ထဲ ငါးတွေ မြူးနေတယ်တဲ့
ရေ အော်သံ ည
လှိုင်းမထန်ဘူး အိပ်ပျော်သွားတယ် ဆိုရင် အဝေးက
သယ်ဆောင်လာတဲ့ သူတို့ အနံ့ကို ရတော့တာပဲ ပင်လယ်လေ ရှုရှိုက်ရသလို
ဆံပင်စုတ်ဖွားဖွား မျက်လုံး ပြူးထားသူများ
ဖုံးမြည်သလို တုန်တုန်သွားတဲ့အခါ ခေါင်းညိတ်ခေါင်းခါ မေးဆတ်ပြကာ
တိမ်ထူတဲ့အခါ အနွေးထည်တွေ လိုတော့တာပဲ
အထီးအမ ခွဲခြားမရဘူး အမျိုးအစားက
နွေ သစ်ရွက် ဓာတ်ပုံ အပြင် အတွင်း တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး နိမိတ်တစ်ခု အဖြစ်တစ်ခု
သင်္ကေတတစ်ခု စကားလုံးများ ဆက်စပ်ယူမှု
တစ်စုနဲ့ တစ်စု ကွန်ရက်တွေ လိုတယ် ကေဘယ်လ်တွေ လိုတယ်
ဖြည့်လို့ရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံလေး
ဘာသာစကား(တခုခု)မှာ စီးနေတဲ့ကား မောင်းနေတဲ့ကား အထီးအမ ခွဲခြားခံထားရတယ်ဆိုတာ
အထီးလား အမလား ကား ဟာ ။ ။
တည်ရရဲ့ ကဗျာတွေကို http://www.tyalife.com/
ဒီသတ္ထုဟာ အဖိုးတန်တယ်လို့ ဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ
တစ်ချိန်တုန်းက ကျော်ကြားတောက်ပတဲ့ ကျူရှင်ဆရာ
ကျောင်းတက်တော့ အတန်းထဲမှာ Roll No.1
ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေး ပျောက်ကွယ်သွားတယ်
အမှန်တစ်ရားဟာ တစ်ခုမကဘူးလို့ ယုံကြည်ထားတယ်
ဂလိုဘယ်ဆန်ဖို့ AUTO CAD တက်တယ်
ဒီသတ္ထုဟာအဖိုးတန်တယ်လို့ ဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ။ ။
အောင်ပိုင်စိုးရဲ့ ကဗျာတွေကို ဒီလင့်ခ်မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်
ကဗျာ/ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ အရးကြီးတယ်
ကားတိုက်ခံရသလိုလို ဘာလိုလို ပြောနေကြတယ်
ဆက်ပြော / ခင်ဗျားဆက်ပြော ...
ခံစားမှုမှာ သိမှုကပ်တာနဲ့ စကားလုံးတွေက ထပ်ချပ်မကွာ
လိုက်လာပြီဘာသာစကားက “ဖတ်” ကနဲ “ဖတ်” ကနဲ ကပ်လိုက်တဲ့
ဆက်ပြော / ဆက်ပြောခင်ဗျား ...
ဟိုဘက်စားပွဲဝိုင်းက ဖုန်းပြောနေတဲ့ ဟိုမိန်းမအကြောင်း
ဆက်ပြော / ခင်ဗျားဆက်ပြော
ခင်ဗျားဆက်ပြော / ဆက်ပြော
ကဗျာရဲ့ လိုင်းတွေထဲမှာ နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းကြပါတယ်
ဖရန့်ခ် အမေလို အရက်စွဲမယ်တော့မထင်ဘူး
ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို တစ်ဝက်မျိုပြီး
ငါးသေတ္တာပြီးတော့ ဖရန့်ခ်ရဲ့ လိမ္မော်တွေအကြောင်း
၂၇ မတ် ၂၀၁၀
ဘလော့ဂ် ကဗျာဆရာများရဲ့နှစ်သစ်ကူး ကဗျာပွဲတော် အစီအစဉ် ၃ (အောင်သာငယ်၊ မောင်ဖုန်းမြင့်၊ အောင်ရင်ငြိမ်း၊ ကမ်းယံ)
ဘလော့ဂ် ကဗျာဆရာများရဲ့ နှစ်သစ်ကူးကဗျာပွဲတော်အစီအစဉ် ၃
ညဉ့်က စိတ်ရူးပေါက်တဲ့ ခွေးတကောင်လို ဟောင်နေ...
အနက်ရောင်တွေကို တထပ်ပြီး တထပ် ခေါ်လာနေ...
သည်မှာတော့ ငါက ထိုင်ရုံလေး ထိုင်နေတာပါလေ...
မင်းက မတ်တတ်ကြီး ဘာထိုင် လုပ်နေတာလဲ...
မင်းကို ငါ အားမရတော့ဘူး...
ငါ့ကို သည်မြို့တော်ထဲကနေ... မင်း ဆွဲ မထုတ်တော့ဘူးလား....
ငါ့ဘာသာ ငါထွက်ခဲ့မယ်... သည်မြို့တော်ထဲက...
“မဟုတ်ဘူး... ကျနော်ကိုယ်တိုင် စိတ်ပျက်နေတာ”လို့ မပြောနဲ့
သည်ညတော့ လမင်းကို ငါ ဓါးနဲ့ခွဲထုတ်ပြီ...
ညထဲကနေ လမင်းကို ငါ
ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ သက်တန့်ပျက်တွေကို မင်းစိတ်ပျက်ရင်
သူတို့ဗိုက်တွေကို ဓါးတချောင်းစီ စိုက်ပစ်လိုက်ကွာ...
ပင်လယ်ရေလေးတစလောက် သွေးတွေလို ထွက်ကျလာရင်
အနီးနားက ရွက်ကျပင်ပေါက်နဲ့ ကောက်သုတ်လိုက်ကွာ...
လမင်းကို ငါ့လက်ထဲမှာ ရယူပြီးတဲ့အခါ
နှစ်ပေါင်းများစွာ မအူခဲ့ရတဲ့ ၀ံပုလွေတကောင်လို
မင်းက စည်းချက်လိုက်ပါ ဇော်ကြီး...
“အကို အဲဒါကဗျာရေးတာမလား...”လို့ မမေးနဲ့...
ငါက အူတူတူ ငနဲဆိုတော့ ငါ့အူသံက ပိုရှည်လျားတာပေါ့လေ...
မင့်က စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး လိုက်အူ လိုက်ရုံပါ ဇော်ကြီး...
ငါတို့ အူသံတွေက နံရံတွေကို ဖောက်ထွက်သွားတာပါ... ..
(ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို သစ်ကောင်းအိမ်က အမည်ပေးပါသည်)
အောင်သာငယ်ရဲ့ကဗျာတွေကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်
ဒီကဗျာ ခင်ဗျား ဘယ်က ရလာတာလဲ ( အပါယ်လေးဘုံသား ကဗျာ )
ဒီမှာ. . .
ဒီကဗျာကို ခင်ဗျား ဘယ်ကရလဲ
ခင်ဗျား က မသင်္ကာ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေပြန်ပြီ
ဒီ ကဗျာထဲမှာ ဘာတွေ ပါဝင် ပက်သက်မှုရှိလဲ
ခင်ဗျားး ခြေရာ လက်ရာတွေ ဒီကဗျာ မှာ ကျန်နေခဲ့သေးလား
ဒီ ကဗျာရဲ့ အမျိုးအစား က ဘာလို့ခေါ်လဲ
ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ဖွားလဲ .. မွေးသက္ကရဇ် မလွဲအောင် ဖြေပါ
ဒီကဗျာ ရဲ့ . . အိုင်ဒီ နံပါတ်ကိုပြော
ဒီကဗျာ ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို အကြမ်းပြောပြ
အရပ် (ရှည်/ပု/သင့်) အသား အရည် ( ဖြူ/ ညို/ မဲ)
ဆံပင် အရောင် ၊ မျက် လုံး အရောင်
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ၊ ပညာ အရည်အချင်း
သူအကြိုက်ဆုံး အရောင်က ဘာလဲ . .
ဘာကို စွဲစွဲ မြဲမြဲ ကြိုက်နှစ်သက်လေ့ရှိလဲ . . .
ဒီကဗျာမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်း ချက်ဆိုတာ ရှိလား
ဒီကဗျာ ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိလား
ဒီကဗျာမှာ မျက်ရည်စတွေ စွန်းထင်းပေကျံဘူးလား
ဒီကဗျာ ရဲ့ သောကြာဂြိုဟ်ခုံ အရမ်းမို့မောက်လွန်းနေလား
ဒီကဗျာရဲ့ ထုတ်လုပ်ရာ အရပ်ကဘယ်ကလဲ
( တချို့ကတော့ ရင်ဘတ်ကြီးပါလို့ ခဏခဏပြောကြတယ် ဆရာ )
ဒီကဗျာရဲ့ သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကျန်နေသေးလဲ
အစားထိုးစရာ အစိတ်အပိုင်းရော အလွယ်တကူ ရှာကြံဝယ်လို့ရလား
ဒီကဗျာ က ကလျာဏမိတ်ကောင်း၊ဆွေကောင်းလား
ဒီကဗျာရဲ့လားရာဂတိ ဘယ်လဲ အထက်ဘုံလား / အောက်ဘုံလား
ဒီကဗျာ နေ့စဉ်မှီဝဲသုံးစွဲနေရတဲ့ဆေးတွေရော သူနဲ့အတူ ပါသွားသေးလား
ဒီကဗျာရဲ့ အကြိုက်ဆုံးသီချင်း၊ ရုပ်ရှင်ကား ၊ကော်ဖီအမျိုးအစား ၊ စာအုပ်တွေက ဘာလဲ
ဒီကဗျာနဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာ ဘယ်အချိန်လဲ
ဒီကဗျာက ခင်ဗျားရင်အုံတည့်တည့်ကို ဓါးနဲ့ထိုးစိုက်ခဲ့တာလား
ခင်ဗျားနဲ့ရော ရန်ငြိုးရန်စ ရှိခဲ့ကြလား . . .
“အခု ဒီကဗျာသေဆုံးသွားရမှု မှာ ဘယ်သူ တာဝန် အရှိဆုံးလဲ”
အပြင်လောကရဲ့အမှောင် အိပ်မက်ထဲထိထိုးကျနေတယ်၊ လက်တွေ့ဘ၀က ထွက်ပြေးသွားဖို့ လမ်းညွှန်၊
လောကအပြင်ဆီ ရောက်သွားနိုင်မယ့် လမ်းသွယ်များ၊ ပင့်ကူမျှင်တွေနဲ့ ဟင်းလင်းပြင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ
နောက်ကျောဆီက ချောင်းမြောင်းကြည့်နေသလို၊ နာရီလက်တံများ တစ်ချိန်တည်းရပ်တန့်နေကြ၊
အသံမထွက်တဲ့ စန္ဒရားတွေ၊ စက်နှိုးမရတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊ အမြဲလွဲချော်နေတဲ့ အချိန်ဇယားတွေ၊
လေဟာနယ်ထဲ အော်သံတစ်ခု ပဲ့တင်မျောလွင့်၊ ကန္တာရပန်းပွင့်များ စက်ယန္တရားဆန်ဆန် ဖူးပွင့်လာ၊
ကမ္ဘာမြေဆီက ပန်းထွက်လာတဲ့လိမ္မော်၊ သစ်ပင်တွေဆီက အရည်ပျော်လာတဲ့ အစိမ်း၊
အက်ဆစ်မိုးတိမ်တွေဆီက မီးခိုး၊ အရောင်တွေအောက် လူတစ်ယောက်နစ်မြုပ်သွား၊ မီးလောင်ပြင်ထဲ
သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေ ပြေးလွှားအော်ဟစ်၊ ကိုယ်တစ်ပိုင်းပြတ် ရုပ်တုတွေ၊ အတိတ်ဘဝ ရုပ်ပုံလွှာတွေ၊ နံကြားထဲ
စိုက်ဝင်နေတဲ့ ဓားမြောင်တွေ၊ တစ်နေရာရာမှာ အလင်းရောင်ရှိနေမလား၊ နတ်မိစ္ဆာများရယ်သံ၊
အော်ဂလီဆန်စရာ အနံ့အသက်နဲ့၊ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ဖြတ်ဝင်သွားတဲ့မိန်းမ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ထူးခြားဆန်းကြယ်
ဖောဌပ္ပအာရုံ၊ အိပ်မက်နှင့် အစစ်အမှန်နယ်ခြားမျဉ်းများ ရောထွေး၊ မိုးပျံပူဖောင်းတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး
ပေါက်ကွဲ၊ ဘာသာစကားရဲ့ ပရိယာယ်၊ အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းရာသို့ အမြန်ပြောင်းရွှေ့ပါ၊ အချက်ပြမီးရောင်၊
အဆုတ်ထဲမှာ ကာဗွန်မိုနော့ဆိုက်တွေ ပြည့်နေပြီ၊ အသက်ဇီဝဟာ လည်ချောင်းဝမှာ တစ်ဆို့နေ၊
တစ်ဟုန်ထိုးကြွေကျသွားတဲ့ ကြယ်တံခွန်များ၊ လေယာဉ်ပျံတွေ အုပ်ဖွဲ့ပျံသန်းလာ၊ ဒီနေရာက အမြန်ထွက်ခွာမှ
ဖြစ်မယ်၊ ကောင်းကင်ပေါ် ကိုယ်ခန္ဓာပျံဝဲ၊ ကျောက်ဆောင်ကျောက်သား ပိရမစ်များဖြတ်ကျော်၊ ချော်ရည်ပူတွေ
ဖြာထွက်နေတဲ့ ရေပန်းများ၊ မကောင်းဆိုးဝါးသင်္ကေတများ၊ လင်းနို့လိုဏ်ဂူများ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ဆွဲငင်သော
၀င်္ကပါမှအလွန်၊ နေရောင်ရဲ့ သဲလွန်စကိုမြင်ရပြီ၊ ရုတ်တရက် မီးတောင်သေများပေါက်ကွဲ၊ သံသရာမှ
လွတ်မြောက်အောင် ခုန်ထွက်ရာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာဆဲလ်များ တစ်စစီပြိုလွင့်၊ မီးခိုးငွေ့တွေလို၊ ကျွန်တော်ဟာ
သေခြင်းတရားဆီ အငွေ့ပျံသွားတဲ့ သုညအမှုန်လေးတစ်မှုန်။
ကမ်းယံရဲ့ ကဗျာတွေကို ဒီမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်